Recovery ကိုတံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Recovery ကိုတံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Recovery ကိုတံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ ထုတ်ကုန်များ)
လှိမ့်ပုံ-up, စက်မှု Recovery ကိုသန့်ရှင်းအခန်းတံခါး
လှိမ့်ပုံ-up, အမြင့်မြန်နှုန်းစက်မှုအော်တို Recovery ကိုသန့်ရှင်းအခန်းတံခါး စက်မှုအော်တို Recovery ကိုသန့်ရှင်းအခန်းတံခါး, clean ရန်လွယ်ကူ Self-လျှော်ကြေးများမှာလုံခြုံစိတ်ချရသော, စွမ်းအင်ချွေတာရေးဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်မည်သည့်နေရာအရပ်သုံးပြီးနိုင်ပါတယ်။ တံခါးကိုကာစရာကုလားကာ (က forklift...
CE အရည်အချင်းပြည့်မှီသော Auto Recovery မြန်နှုန်းတံခါး
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် မြန်နှုန်းမြင့် PVC ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်သောတံခါး၏ဘောင်သည်သွပ်ရည်စိမ်သို့မဟုတ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်တံခါးကိုအဓိကခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လျှောက်လွှာများ: လေတိုက်နှုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်၊ အပူချိန်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆေးဝါး၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊...
Self Recovery PVC အမြန်နှုန်းတံခါး
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မှော်တံခါး - PVC Zipper Door (ကိုယ်တိုင်ပြင်ခြင်းတံခါး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတံခါး၊ Auto recovery တံခါး) ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။ Zipper ၏မြန်ဆန်သောတံခါးသည်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်သာမကသင်၏အမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်ကူညီပေးသည်။...
PVC အလိုအလျောက်မိမိကိုယ်မိမိမြန်မြန် Roll Up တံခါးကို
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘာကြောင့် PVC Zipper Door (Self repair door၊ Self recovery တံခါး၊ Auto recovery တံခါး) လိုအပ်ပါသလဲ။ ဇစ်ပါမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးသည် ၁ မီတာထက်ပိုမိုသောတံခါးဖွင့် / ပိတ်နိုင်သည်။ စွမ်းအားကိုလုံးလုံးလျားလျားဆန့်ကျင်နိုင်သည်။ သင်၏တံခါး၊...
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Aluminum Alloy Rapid Roll Up Door
PVC အမြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် PVC အမြန်နှုန်းရှိသောတံခါးသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးလျင်မြန်စွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ မြန်မြန်မြန်သောတံခါးသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ အအေးခန်းအတွက်အမြန်တံခါးများသည်တံခါးပေါက်စနစ်များဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းခေါက် Up ကိုကြိတ်စက် Shutter တံခါး
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းခေါက် Up ကိုကြိတ်စက် Shutter တံခါး သောအပူနှင့် Chilling insulator တွင်လည်း၏စွယ်စုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ပြည့်စုံရှန်ကျန်း Hongfa အလိုအလျောက်တံခါးကုမ္ပဏီ, Anti-အင်းဆက်ပိုးမွှား, windproof, Anti-ဖုန်မှုန့်, soundproof, Anti-မီး, Anti-အနံ့နှင့် natual အလင်းရောင်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အဆင့်မြင့်...
ဘဏ်အလိုအလျောက်သံမဏိ Glass ကိုတံခါးဆွဲယူ
ထုပ်ပိုး: သစ်သားဖြစ်ရပ်မှန် + ပူဖောင်းအိတ်
ဘဏ်အလိုအလျောက်သံမဏိ Glass ကိုတံခါးဆွဲယူ Glass ကိုအိမ်တံခါးလျှော တစ်ခုတည်းသောအရွက်အလိုအလျောက်လျှောတံခါးကိုသို့မဟုတ် bi-နှုတ်ဆက်စကားအလိုအလျောက်လျှောတံခါးကိုအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်လည်း frame သို့မဟုတ် frameless ဖန်တံခါးကိုမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အထူးဒီဇိုင်း 4.2m လူမီနီယံလမ်းကြောင်းနှင့်အဖုံးကို (စံအရှည် 4.2m,...
self-ပြုပြင် auto-Recovery ကို PVC မြန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Shutter တံခါး
self-ပြုပြင် auto-Recovery ကို PVC မြန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Shutter တံခါး self-ပြုပြင် auto-Recovery ကို PVC မြန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Shutter တံခါးမြန်နှုန်းမြင့် partition ကို function ကိုနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းတံခါးသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးတံခါးကို frame...
ထုပ်ပိုး: Plywood box package
self-Recovery ကို PVC အမြင့်မြန်နှုန်းဇစ် self-ပြုပြင်ခြင်းတံခါး
self-Recovery ကို PVC အမြင့်မြန်နှုန်းဇစ် self-ပြုပြင်ခြင်းတံခါး ဇစ်လျင်မြန်စွာတံခါးကိုအင်္ဂါရပ်များ: ဖွင့်ပါ: 1.2-2.0 m / sec အမြင့်လုံစွမ်းအင်ထိရောက်: ဇစ်မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာနှင့်ကုလားကာရထားလမ်းနည်းပညာအများဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုယ်ပိုင်ငြိမ်းစေလျက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ငွေစုဘို့အမြင့်ဆုံး sealability...
High Quality မြန်တံခါး Up ကို Roiling
အလိုအလျောက် PVC ပစ္စည်းမြန် Roll-up, တံခါး နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကနေသင်ခန်းစာတွေကိုဆွဲခြင်းနှင့်အတူတူပင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဒါကြောင့်အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်လွတ်လပ်စွာ developed.It...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကြိတ်စက် Shutter တံခါး Up ကိုခေါက်
အမြင့် Spee ကြိတ်စက် Shutter တံခါး Up ကိုခေါက်dAnti-အင်းဆက်ပိုးမွှား, windproof, Anti-ဖုန်မှုန့်, soundproof, Anti-မီး, Anti-အနံ့နှင့် natual အပူနှင့် Chilling insulator တွင်လည်း၏စွယ်စုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ပြည့်စုံရှန်ကျန်း Hongfa အလိုအလျောက်တံခါးကုမ္ပဏီ, နေဖြင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အဆင့်မြင့် technique...
အလိုအလျောက် PVC ပစ္စည်းမြန် Roll-up, တံခါး
အလိုအလျောက် PVC ပစ္စည်းမြန် Roll-up, တံခါး နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကနေသင်ခန်းစာတွေကိုဆွဲခြင်းနှင့်အတူတူပင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဒါကြောင့်အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်လွတ်လပ်စွာ developed.It အမြန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်...
စက်မှုအထက်တန်းမြန်နှုန်း Windproof PVC ခေါက် Up ကိုတံခါး
စက်မှုအထက်တန်းမြန်နှုန်း Windproof PVC ခေါက် Up ကိုတံခါး T ကသူစက်မှုဇုန် stack တံခါးကိုထိုကဲ့သို့သောအပူထိန်းသိမ်းခြင်း, အအေးထိန်းသိမ်းခြင်း, အင်းဆက်ပိုးမွှားသက်သေပြ, windproof, dustproof နှင့် soundproof အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ high-performance...
စမတ်အော်တိုအာရုံခံတံခါး Up ကိုခေါက် သူအမြန်တံခါးကို stacking T ကထိုကဲ့သို့သောအပူထိန်းသိမ်းခြင်း, အအေးထိန်းသိမ်းခြင်း, အင်းဆက်ပိုးမွှားသက်သေပြ, windproof, dustproof နှင့် soundproof အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်, ကားရပ်နားအများကြီး, စက်မှုဇုန်အပင်, အစားအစာ, အထည်အလိပ်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း,...
ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်း insulator တွင်လည်း Panel ကိုတံခါး
စက်မှုဇုန်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုအဆင့်မြှင့် တံခါးကို pane ထဲက, ထိုအပုဒ်တလျှောက်တွင်ဓာတ်လှေကားတစ်ခုစီးရီးရေးစပ်စက်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို။ စတိုင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပြီးချောမွေ့လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုသာယာသောခံစားချက်ပေးသည်။...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းခေါက် stack ပြည်ထဲရေးတံခါးဆွဲယူ Anti-အင်းဆက်ပိုးမွှား, windproof, Anti-ဖုန်မှုန့်, soundproof, Anti-မီး, Anti-အနံ့နှင့် natual အပူနှင့် Chilling insulator တွင်လည်း၏စွယ်စုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ပြည့်စုံရှန်ကျန်း Hongfa အလိုအလျောက်တံခါးကုမ္ပဏီ, နေဖြင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အဆင့်မြင့် technique...
Aluminum Alloy Overhead Rolling Upgrading Door
ထုပ်ပိုး: Plywood case or Cardboard , suitable for sea freight or air freight
Aluminum Alloy Overhead Rolling Upgrading Door The industrial upgrading garage door,composed ofaseries of door pane, lift along the tracks. With stylish appearance design, simple and smooth line design, it gives usapleasant feeling. The stable and spectacular operation of larger industrial products can give people...
Recovery ကိုတံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ Screen ကိုတံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ မြန်တံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ တံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ PVC တံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ Transparent Crystal တံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ ရောင်းမည်တံခါး Up ကိုလှိမ့်ပုံ Rapid တံခါးပေါက် Up ကိုလှိမ့်ပုံ